Ukuphupha ibhatyi yesikhumba Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ijacket yesikhumba inokuba yingubo esebenzayo kunye nefashoni. Izinto eziqinileyo zikhusela umzimba ngcono kunamalaphu. Kungenxa yoko le nto, umzekelo, iibhatyi zenqwelo moya ezindala okanye iimpahla zesithuthuthu zenziwe ngesikhumba esomeleleyo. Amapolisa kunye nabasebenzi bezokhuseleko banxiba iibhatyi ezikhuselekileyo zesikhumba kwimishini ethile.
Namhlanje, iibhatyi zesikhumba ziza kuzo zonke iifashoni ezinokubakho. Imibala emdaka ngombala kunye nomnyama ngoku iyancediswa yimibala eqaqambileyo okanye iithowuni zepastel. Nangona kunjalo, umfanekiso onzima wobudoda usabambelela kwengubo ngokubanzi.
Ukuba umntu uphupha ibhatyi yesikhumba, banokufuna ukufezekisa umnqweno ekudala ulindelwe. Ukuba iphupha linabo, uziva izinto eziqinileyo kwaye usenokuziva nobunzima bengubo. Usenokude uqaphele ivumba elikhulu lesikhumba. Iinkcukacha zento eyenzeka ngqo kwibhantshi ephupheni zibonelela ngolwazi malunga nentsingiselo yesimboli yephupha.
1 Uphawu lwephupha «ibhatyi yesikhumba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibhatyi yesikhumba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibhatyi yesikhumba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhatyi yesikhumba» - ukutolikwa ngokubanzi
Ibhatyi yesikhumba ifanekisela ukutolikwa kwamaphupha. Umfanekiso wakho yalowo uleleyo. Umfanekiso wephupha utyhila indlela ozibona ngayo okanye ongathanda ukuba babonwa ngayo ngabanye. Kuba isambatho sibonisa ukunxanelwa i-adventure, umntu ophuphayo kufuneka azibuze ukuba oyena ndoqo wakhe ungo-daredevil okoyikisayo okanye angathanda ukujongeka ngoluhlobo.
Ibhatyi yesikhumba ayisebenzi kuphela ngaphandle, ikwabonelela ngokhuseleko oluthile kulimala. Ke ngoko, uphawu lwephupha lukwangumqondiso wozinzo kunye nohlalutyo lokulala. ukhuseleko. Iphupha lithembisa ngekamva elilungileyo.
Ukutolikwa okuxhaphakileyo kwamaphupha, into ayenzayo umphuphi ngengubo yesikhumba kubaluleke kakhulu. Ukuthenga okanye ukuzithengisa kubonisa ukucinga okucacileyo kunye nezinto eziyinyani. Nangona kunjalo, inokuba ngumqondiso wayo. Uvakalelo olukhulu kuba xa unxiba ibhatyi yokukhusela ephupheni.
Ukuba umntu olalayo wenza isambatho ngokwakhe, uphawu lwephupha lubhengeza umsebenzi ongaqhelekanga kwaye unzima ngokokuhlalutya kwephupha. Ukugcina ibhatyi enjalo enamafutha esikhumba ephupheni kunokubonisa ukuba ufuna ukunxiba abanye.
Ukugqiba ibhatyi yesikhumba ephupheni uthembisa ukuzaliseka kweminqweno eyimfihlo. Ngokunyamezela kunye nokuzimisela, iphupha ekugqibeleni lifikelela kwimpumelelo. Ukuba uphawu lwephupha "ibhatyi yesikhumba" yenziwa ngesikhumba esimdaka, oku kubonisa ukungakhathali kwiingxaki ezithile ngaphakathi kokuchazwa kwamaphupha.
Uphawu lwephupha «ibhatyi yesikhumba» - ukutolikwa kwengqondo
Ijacket yesikhumba inakho, njengayo nayiphi na ingubo, ibonise ukuba umntu ophuphayo ufuna ukufihla iinxalenye zobuntu bakhe kwaye ufuna ukubonakalisa izinto ezithile ngaphandle. Ngokwengcaciso yokutolikwa kwengqondo yamaphupha, isimboli yephupha luphawu lwayo Fungisaukuba ufuna ukuzinika.
Ephupheni, ngokoluhlalutyo lwamaphupha, i-subconscious ikwatsala ingqalelo kubuthathaka kunye neempazamo umphuphi angafuni ukuzivuma kuye okanye kwabanye. Iminqweno eyimfihlo ingabonakaliswa kwisimboli sephupha "ibhatyi lesikhumba", umzekelo utyekelo lwe-sadomasochistic.
Kwakhona, ibhatyi yesikhumba ephupheni inikezela ngolwazi malunga neempawu ezithile zomntu olalayo. Ngokwenkcazo yephupha, umfanekiso wephupha ubonakalisa ukuzingisa okukhulu kunye nokubhengezwa. Unyamezelo phantsi. Oku kunceda iphupha lijongane neemeko ezinzima kunye neengxaki ezinzima. Ephupheni lebhatyi lesikhumba, kubonakaliswa nobungqingili, apho umntu ophuphayo atsalela inxenye kwiminqweno yakhe.
Kuba umbandela awukhathaleli iimpembelelo zangaphandle, uphawu lwephupha ngamanye amaxesha lukwabonisa ukungazi kunye nentliziyo ebuhlungu. Nangona kunjalo, kuhlalutyo lwamaphupha, ibhatyi yesikhumba nayo inokubonisa ukuba umntu ophuphayo unengxaki yokungakhathali kuyo.
Uphawu lwephupha «ibhatyi yesikhumba» - ukutolika kokomoya
Ibhatyi yesikhumba sisixhobo esomeleleyo ingakumbi esisusa izinto eziyingozi. Ekuchazeni amaphupha okomoya, ke oko kukwathetha ukhuselekooko kuphupha kuyonwabela kwindawo egqithileyo.
Nangona kunjalo, uphawu lwephupha lunokuba luphawu lokuba umntu uthanda ukubandakanyeka kuphando. ukukhula kwengqondo ukohlwaya.